१६ सयले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? « Lokpath
१६ सयले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । मंगलबार नेपाली बजारमा चाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ ।
सोमबार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ९३ हजार ९ सय रहेको थियो । भने आज तोलामा १६ सयले कमी आइ प्रतितोला छापावाला सुन ९२ हजार ३ सय कायम भइ कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य ९१ हजार ८ सय रहेको छ ।
महासंघका अनुसार सोमबारको तुलनामा आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला १५ रुपैयाँले गिरावट आएको छ । सोमबार चाँदीको प्रतितोला मूल्य १२ सय ७० रहेको थियो भने मूल्य गिरावट आइ १२ सय ५५ कायम भइ कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७८,मङ्सिर,७,मंगलवार १२:०२